ကမ်းဇော်စေ့ ကောက်ယူသူ များပြားနေ၍ ခိုက်ရန် မဖြစ်ပွားစေရန် အာဏာပိုင် အဖွဲ့များမှ သွားရောက် သတိပေးနေရ: ကော့သောင်း၊ မေ ၂၄
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကော့သောင်းခရိုင် ဘုတ်ပြင်းမြို
'လူငယ်ထဲက အရွယ်ရောက်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်သူရှိပါတယ်'လို့ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် အေးဝတ်ရည်သောင်း: ရန်ကုန်၊ မေ ၂၄
ရတနာပုံ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှတစ်ဆင့်အနု ပညာလောကသို့ တစ်
မြန်မာ-အိန္ဒိယ ရိဒ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ပြန်လည် စတင်ချိန်တွင် မြန်မာဘက်မှ ကွမ်းသီး အများဆုံး တင်ပို့ရောင်းချနေရ: ကလေး၊ မေ ၂၄
မြန်မာ-အိန္ဒိယ ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အရောင်းအဝယ်ကို မေလဆန်
ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် အသင်း နည်းပြရာထူးမှ ဆမ်အလာဒွိုက်စ် အံ့အားသင့်ဖွယ် နုတ်ထွက်ခဲ့: ပရီးမီးယားလိဂ်ဝါရင့်နည်းပြ ဆမ်အလာဒွိုက်စ်သည် ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းအား တာ
ကမ္ဘာ့ ရှားပါးမျိုးစိတ် 'ဧရာဝတီလင်းပိုင် ကြည့်သော ခရီးစဉ်' များ ယခုနှစ်အတွင်း စတင်မည်: ရန်ကုန်
ကမ္ဘာ့ရှားပါးမျိုးစိတ်အဖြစ် တန်ဖိုးထားသည့် ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ
အုတ်တွင်းမြို့တွင် မူးယစ်ဆေးပြား သုံးသောင်းနီးပါး ဖမ်းဆီးရမိ: အုတ်တွင်း
မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးမိ သော တရားခံများ၏ ထွက်ဆိုချက်
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးသားဥ မွေးဖွားလုနီးချိန် ကျေးဇူးပြု၍ အားလုံး ငြိမ်ငြိမ်ကလေးနေပေးကြပါ: အနှစ်(၇ဝ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှု၏ မနီးသောခရီးကို လေ့လာသ
ကိုပါဒယ်ရေးလ် ဗိုလ်လုပွဲအပြီး နည်းပြသစ် ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘာစီလိုနာဥက္ကဋ္ဌ ဘာတိုမြူ ဆို: ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘောလုံးရာသီ စပိန်လာလီဂါ ပွဲစဉ်များအပြီးတွင် ဒုတိယနေရာဖြင့်သာ
အက်ဖ်အေ ဖလားပွဲပြီးမှ အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်မည်ဟု ဂျွန်တယ်ရီ ဆို: ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည့် ချဲလ်ဆီးအသင်း၏ အသင်းခေ
လူငယ်တွေ ဂိမ်းကစားတာနဲ့ အချိန်ကုန်တော့မှာလား: ယနေ့ခေတ် ကလေးငယ်များ နေရာ တကာမှာ ဂိမ်းကစားပြီး အချိန် တွေ ဖြုန်းနေကြပါ
M-Bwel (Online Editor) Website URL: 27
Jun Published in Sport Be the first to comment! ယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီး အသင်းတွင် ဆက်ရှိနေရန် မသေချာကြောင်း အင်္ဂလန်နည်းပြ ပြောကြား ယူရို ၂ဝ၁၆ ပြိုင်ပွဲတွင် ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရောက်ထားနိုင်ခဲ့သည့် အင်္ဂလန်အသင်း၏နည်းပြ ရွိုင်းဟော့ဆန်က အင်္ဂလန်နည်းပြရာထူးအား ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မလွယ်ကူကြောင်း၊ အက်ဖ်အေ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ယူရို ပြိုင်ပွဲတွင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ သည့်တိုင် ပြိုင်ပွဲအပြီး၌ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန် စဉ်းစားဖွယ်ရှိ နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Jun Published in Sport Be the first to comment! အကာအကွယ်များ ဝတ်လာခဲ့ရန် ဂျူဗင်တပ် အသင်းဖော်များမှ အသိပေးထားကြောင်း စပိန်တိုက်စစ်မှူး မိုရာတာ ဟာသ အရွှန်းဖောက်ခဲ့ ကျင်းပလျက်ရှိသည့် ယူရို ၂ဝ၁၆ ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်တွင် အီတလီအသင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည့် လက်ရှိချန်ပီယံစပိန်အသင်း၏ လူငယ်တိုက်စစ်မှူးမိုရာတာက အီတလီနှင့်ပွဲစဉ်တွင် အီတလီထိပ်သီးကလပ် ဂျူဗင်တပ် အသင်း၏ အသင်းဖော် များမှအကာအကွယ်များဝတ်ဆင်၍ပွဲထွက်ကစားရန် ကြိုတင်အသိ ပေးထားကြကြောင်း ဟာသအရွှန်း ဖောက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Jun Published in Sport Be the first to comment! စွဲမက်ဖွယ် ကစားကွက် ပိုင်ဆိုင်ရုံဖြင့် နိုင်ပွဲတစ်ပွဲ မရနိုင်ကြောင်း ပေါ်တူဂီနည်းပြ ဆန်းတို့စ် ဆို ခြောက်ကြိမ် ဆက်တိုက် ကွာတားဖိုင်နယ် တက်ရောက်နိုင်သည့် အသင်းအဖြစ် ပေါ်တူဂီ ရပ်တည် ယူရို ၂ဝ၁၆ ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်တွင် ခရိုအေးရှားအသင်းအား အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်သို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည့် ပေါ်တူဂီအသင်း၏ နည်းပြဖာနန်ဒိုဆန်းတို့စ်က နည်းဗျူဟာပိုင်းအရ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရသည့် အတွက် ခက်ခဲသည့်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ပြိုင်ပွဲအတွင်းစွဲမက်ဖွယ်ကစားပုံနှင့်အတူ လှလှပပကစားတိုင်းနိုင်ပွဲမရရှိနိုင်သည်ကို ခရိုအေးရှားအသင်းကသက်သေ ပြခဲ့ကြောင်း ပွဲအပြီးတွင်ဖွင့်ဟပြော ကြား သွားခဲ့သည်။
...21752176217721782179...218121822183Page 2179 of 2855 Latest Articles ကော့သောင်း၊ မေ ၂၄
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကော့သောင်းခရိုင် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ရှိ ကော့ရဲကျွန်း ကျေးရွာတွင် အလေ့ကျပေါက်ရောက် နေသော ဆေးဖက်ဝင်အစေ့တစ် မျိုးဖြ...25-05-2017 Hits:22 Others DMT ရန်ကုန်၊ မေ ၂၄
ရတနာပုံ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှတစ်ဆင့်အနု ပညာလောကသို့ တစ်ကြော့ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်အေး ဝတ်ရည်သောင်း...
မေး - အနုပညာအလ...25-05-2017 Hits:25 Entertainment NN ကလေး၊ မေ ၂၄
မြန်မာ-အိန္ဒိယ ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အရောင်းအဝယ်ကို မေလဆန်းပြန်လည်စ တင်ချိန်မှ ယခုရက်ပိုင်းအထိ မြန်မာဘက်မှအများဆုံးတင်ပို့ရောင်း ချနေသည့်က...25-05-2017 Hits:16 Business DMT ပရီးမီးယားလိဂ်ဝါရင့်နည်းပြ ဆမ်အလာဒွိုက်စ်သည် ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းအား တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခဲ့သည့်အချိန် ငါးလတာကာလအတွင်း တန်းမဆင်းရအောင်စွမ်း ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ...25-05-2017 Hits:14 Sport WKM Business Info